20/10/2015 – Gentleman Magazine
အိပ်စက် အနားယူသင့်တဲ့ ကြာချိန်
တရက် ၈ နာရီအိပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အဆိုဟာ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြား အားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်တယ်ဆို သင် မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ “Nationanl Sleep Foundation” လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ အသက်အလိုက် အိပ်သင့်သည့် ကြာချိန် များကို ဖော်ပြသွားပေးပါမယ်။ မွေးကင်းစ မှ ၃ လ အထိ – ၁၄
ဘီယာဘာ ကြောင့်သောက်သင့် တာလဲ
မဖတ်ခင်လေး ဘီယာတစ်လုံးလောက်သွားဆွဲပြီးသောက်ရင်းဖတ်ပါ ဘီယာသောက်တက်တဲ့ လူတွေ အတွက်တော့သီတင်းကောင်းပါ။ ဘီယာမသောက်တက်သေး တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အကြောင်းပြချက်ရတယ်လေ။ တရုတ်သိပ္ဗံပညာရှင်တွေက ဘီယာဟာ သင့်ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ ရှာဖွေတွေ့ရှိလို်က်ပါပြီ။ အဓိက ဘီယာမှာပါတဲ့ Xanthohumol ဆိုတာက ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောနဲ့ ပက်သက်တဲ့ မေ့တက်တဲ့ Alzheimer ရောဂါ လိုမျိုးတွေကို ကာကွယ်နို်င်ပါတယ်တဲ့။ ကြွက်တွေမှာ
ဒီနေ့တော့ သောက်ဆေး တွေ. ထိုးဆေးတွေ .လိမ်းဆေး . ပန့် တွေရဲ့အားလုံးရဲ့နောက်က လျှို့ဝှက်ချက် ကိုဖော်ထုတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ ယောက်ျားလေးတိုင်း အော ကား ခေါ် “လူရိုင်းကား ၊ အပြာကား” (PORN) ကြည့်ဖူးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ခုစာကို ဖတ်နေပြီဆိုကတည်း က
ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေကို တွေ့ဖူး၊ မြင်ဖူး၊ဆက်ဆံဖူးကြမှာပါ။ အခုခေတ်မှ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေ ကို ပိုက်ဆံရှိသူတွေ၊ အောင်မြင်တဲ့သူတွေ လို့လူတွေက မှတ်ထင်ထားတက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆောင်းပါက လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်ခြင်း – ကျောင်းတက်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တပျော်တပါးလျှောက်သွားတက်ကြသလို ၊လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်လာတော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့
ဘူကောင်တွေနဲ့ ဘယ်လို ဆက်ဆံရမလဲ
လူတိုင်းက အဆိုးမြင်သမားများကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကြုံတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုးမြင်ဝါဒက ရောဂါသဖွယ် အလွယ်တကူကူးဆက်နိုင်တဲ့ အတွက် ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အမြင်ဆိုး များ complain များကို နားမထောင်ပါနဲ့ ၂။ စိတ်ခံစားမှုကို စနစ်တကျအတွေးအခေါ်နှင့် ထိန်းပါ ၃။ ပြောတိုင်းမယုံပါနဲ့ ၄။ စိတ်ထင်ရာ လွယ်လွယ်မလိုက်ပါနဲ့
ပထမဆုံး အကြိမ် ချိန်းတွေ့တာ အောင်မြင်ဖို့ အတွက် အချက် ၁၀ ချက်
ချိန်းတွေ့ရင်လုပ်ရမယ့် အရာတစ်ချို့ဟာ သိပြီးသားတွေပါပဲ။ ဥပမာ မိန်းကလေး ၉၅% လောက် သူတို့ ရုပ်ရည်ကို ချည်းမွန်းစေချင်ပါတယ်။ ဒီလုိုပဲ ချိန်းတွေ့တဲ့နေ့မှာ ဖုန်းဆက်ပြီး နေရာနဲ့ အချိန် သတိပေးတာကို လိုချင်ပြီး စားသမျှကို လည်းယောက်ျားလေးက ရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စားသောက်ဆိုင်ရွေးချယ်မှု ၊ရှပ်အင်္ကျီအရောင်
ကိုယ့်ဘဝကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် အဝတ်အစား
ကြိုက်သည်ရှိ မကြိုက်သည်ရှိ သင်ဝတ်တဲ့ အဝတ်အစားက သင့်အဆင့်အတန်းကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဝတ်အစားကနေ အဆင့်အတန်းကို ပြောတယ်ဆိုတာကတော့ အပေါ်ယံ ဆန်လွန်းတယ်ထင်ရပေမယ့် လူအများက သင့်ကိုမြင်မြင်ချင်းပုံကို အကဲခတ်မှာ ဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားမှ သင့်အကြောင်းကို နောက်မှစုံစမ်းမှာပါ။ မြင်မြင်ချင်း ဂွမ်းနေရင်တော့ နောက်မှ အဖတ်ဆည်လို့တော်တော်ခက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဝတ်အစား နဲ့ အပြောအဆိုတွေဟာ အလုပ်ကိစ္စနဲ့
အလုပ်အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု ကင်းမဲ့ သော ဝန်ထမ်းများ၏ အကျင့် ၁၃ ခု
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ရှိနေပြီး ဖြစ်တဲ့လူတိုင်းဟာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ၊ လက်အောက်ငယ်သားများနဲ့ အမြဲ ဆက်ဆံနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့သော လူများက ကိုယ့်ကို အလုပ်ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိအောင်အားပေး သလို အချို့သူများကတော့ အလုပ်အပေါ်မှာ စိတ်ပျက်အောင် အတင်းချတက်ကြပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ အဆိုးမြင်ဝါဒီ တစ်ယောက် သို့မဟုတ် အဆိုးမြင်သမားရဲ့ စကားတွေနားထောင်မိတယ်ဆိုရင် သင့်အတွက်
အတွဲတွေ ညားမညား ခန့်မှန်းပေးမယ့် ပုံသေနည်း
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ အသည်းနှလုံးရဲ့အလုိုအရ စိတ်နှစ်ခုပေါင်းစည်းထားပြီး သေချာ ရှင်းပြဖို့ခက်တယ်လို့ထင်နေရင် သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အချစ်ဆိပ်တက်နေသူတွေ က ဘာကြောင့်ချစ်မိသွားလဲမသိဘူးတို့ . ဘာမှအချစ်လောက်အရေးမကြီးဘူးတုို့ဘာတို့ အချစ်ဟာရှင်းပြလို့မရဘူးလို့ ပြောနေကြပေမယ့် အချစ်ဖြစ်ပေါ်ရန် ခြေခံ အကျိုးအကြောင်းအချို့လုိုအပ်ပါတယ်။ မှန်သည်ဖြစ်စေ. မှားသည်ဖြစ်စေ . အလှအပ နဲ့ ငွေကြေး ကြွယ်ဝမှု တွေက ဟာ
သာယာပျော်ရွှင်သောလူများ၏ လျှို့ဝှက်ချက် ၇ ခု
လူတိုင်းလိုလုို ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်ချင်ကြပေမယ့် အနည်းငယ်သာ ပျော်ရွှင်သောဘဝများကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေရှိသလုို ကိုယ်ထိန်းချုပ်လို့မရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အသက်ရှင်နေသ၍ အပျော်ရွှင်နိုင်ဆုံးဖြစ်နိုင်ရန်အတွက် ကိုယ်တုိုင်လုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲက အကောင်းဆုံး ၇ ချက်ကိုဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ၁။ သူငယ်ချင်းကောင်း များထားပါ – လက်တွေ့အပြင်မှာ ဆုံတွေ့နေသာ ကိုယ့်အပေါ်အပြန်အလှန်ကောင်းသော၊နားလည်တက်သော သူငယ်ချင်းများများ ထားပါ။ Facebook ပေါ်က
ခုချိန်ထိ ချိန်ပါဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းများ
သင့်ကိုဘာကြောင့် ဆော်တွေ မကြိုက်တာလဲ စဉ်းစားရခက်နေလား။ သင့်စီမှာ ဆော်တွေကြွေနိုင်တဲ့ အလုပ်၊ ဝင်ငွေ၊ ခန္ဒာကိုယ် တွေပိုင်ဆိုင်နေပါလျှက်နဲ့ ကြောင်သမျှဆော် မှန်သမျှ ရှောင်ရှောင်သွားတာကြုံနေရပါသလား။ ဘာကြောင့်ရှောင်ရှောင်သွားတာလဲသိချင်ရင် ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ သိချင်ရင် အဆုံးထိဖတ်လို်က်ပါ။ လေကြောရှည်ခြင်း ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေတဲ့အခါ သူကြိုက်လာအောင် သင့်ရဲ့ ဘဝအကြောင်းတွေ၊ သင်မိဘ အကြောင်းတွေ၊